Tin Box ထုတ်လုပ်သူများ - သတ္တုထုပ်ပိုးနည်းစနစ်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ | 2020
နေအိမ် / သတင်း / Tin Box ထုတ်လုပ်သူများ - Perfect Artwork အတွက်ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်
Tin Box ထုတ်လုပ်သူများ - Perfect Artwork အတွက်ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်
Tin Box ထုတ်လုပ်သူများ - ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အနုပညာလက်ရာစုံအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများ
Usingacutter guide will help you achieve accuracy in your artwork. So, for the creation of flat metal prints of the artwork, the factories use the cutter guide. Later these prints are converted into tin boxes. If your objective to achieve seamless tins, most tin box ထုတ်လုပ်သူများ would recommend printing solid colors to the body.
There are certain surfaces that cause the printing to bleed. The reason being, the applied ink tends to run out from the edges. The good thing about this is that most of the time is not noticeable. However, if you desire perfection, ask the tin box ထုတ်လုပ်သူများ to avoid such minor mistakes.
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နည်းလမ်း မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း Paid ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် / Litho / လွှဲပြောင်း ဖောင်းကြွ ထွင်းထုခြင်း
လဲမှို့ ၂၀pt ၂၀ pt ၂၀pt
သတ္တု 8pt ၆pt 4pt 4pt
ကဒ် / စက္ကူ ၆ pt ၆pt ၆pt 4pt
သစ်သား ၁၀pt ၁၀ pt ၁၀pt ၆pt
ဂေါက် ၃၀ နာရီ ၃၀ စစ 30pt
ပလပ်စတစ် ၆pt ၆ pt ၆pt
သားရေ ၁၀pt ၁၀ pt ၁၀pt ၁၀pt
ကြွေထည် ၁၀pt ၁၀ pt ၁၀pt ၁၀pt
ဤသည်ထိရောက်သောစားပွဲပေါ်မှာဖြစ်၏ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူစားသုံးသူ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအမှန်တကယ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအရွယ်အစားဖြင့်စဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ပုံနှိပ်ခြင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow နှင့် Black) ဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုမှာ RGB (အနီရောင်၊ အစိမ်း၊ အပြာ) ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်သည် RGB ကိုအသုံးပြုသည်။ ပရင်တာက CMYK ကိုသုံးသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်သင်ဒီဇိုင်းတူသည်ကိုသေချာစေရန်မျက်နှာပြင်၏ RGB အရောင်စံနှုန်းအစား CMYK color standard ကိုသတ်မှတ်ပါ။
Tin Box ထုတ်လုပ်သူများကဤအရေးကြီးသောခြေလှမ်းကိုမပျောက်ရန်တောင်းဆိုသည် ၎င်းသည်ပုံနှိပ်ခြင်းသည်သင်၏ပုံ၏တူညီမှုကိုသေချာစေသည်။
Prev: Personalised tins Box: Guide on Creating Repeating Pattern
နောက်တစ်ခု - ဘီစကွတ်ချက် Cookie Tin ထုတ်လုပ်သူများ - ဗင်များကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြုလုပ်နည်း